သိုင်းရွိုက်ကျန်းမာရေး အတွက် လိုအပ်သော အဟာရများ - Dr.PhyoMaungMaung
သိုင်းရွိုက်ကျန်းမာရေး အတွက် လိုအပ်သော အဟာရများ
သိုင်းရွိုက်ဂရင်း က သိုင်းရွိုက်ဟိုမုန်း ထုတ်ဖို့ အိုင်အိုဒင်း လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်မှာ အိုင်အိုဒင်း ပုံမှန်ရှိဖို့ အတော်အရေးကြီးတယ်။ အိုင်အိုဒင်း နည်းတာဖြစ်ဖြစ်၊ အိုင်အိုဒင်းများသွားလျှင်ဖြစ်ဖြစ် သိုင်းရွိုက်လုပ်ဆောင်ချက် ချို့ယွင်းသွားတတ်ပါတယ်။ အိုင်အိုဒင်း အမြောက်အမြားပါတာက ပင်လယ်ထွက် စားစရာတွေပါ။
Selenium က 5-deiodinase အင်ဇိုင်းကို ထိန်းချုပ်ပြီး သိုက်းရွိုက်ဟိုမုန်း T4ကို T3 ပြောင်းပေးတယ်။ သိပ်အသုံးမဝင်တဲ့ rT3 ဖြစ်တာကို တားနိုင်တယ်။ သိုင်းရွိုက် anti-bodies တွေကို နည်းသွားစေတယ်။ Selenium ချို့တဲ့တဲ့အခါ ခုခံစွမ်းအား ကျဆင်းသွားပြီး ကင်ဆာ နှင့် အော်တိုအင်မြူးရောဂါတွေ ဖြစ်နိုင်တယ်။ Selenium ကြွယ်ဝတဲ့ အစားအစာတွေစားပေးခြင်းဖြင့် သိုင်းရွိုက်ဟိုမုန်းလုပ်ငန်း ပိုမိုကောင်းလာနိုင်တယ်။ သိုင်းရွိုက် ရောင်ရမ်းခြင်း လျော့နည်းသွားနိုင်တယ်။သိုင်းရွိုက်ဆဲလ် ပျက်စီးတာကို ပြုပြင်ပေးနိုင်တယ်။ Brazil nuts၊ ကြက်ဆင်၊ ဆာဒင်း နှင့် ဥအမျိုးမျိုးမှာ selenium တွေပါပါတယ်။ အစားအစာကနေ selenium လုံလောက်အောင် မရနိုင်ဘူးဆိုလျှင် selenium supplements သောက်ဖို့လိုပါလိမ့်မည်။
ဥအမျိုးမျိုး၊ ကြက်သား၊ ဆော်လမွန်ငါး ၊ အမဲသား၊ ဖရုံစေ့ နှင့် ဟင်းနုနွယ်တွေမှာ zinc ပါဝင်ပါတယ်။ သိုင်းရွိုက်ဟိုမုန်း ထုတ်လုပ်မှုမှာ zinc ပါဝင်ပြီး zinc ချိုတဲ့ တဲ့အခါ hypothyroidism ဝေဒနာ ခံစာရပြီး အရေပြားခြောက်သွေ့ခြင်း၊ ဆံပင် ကျွတ်ခြင်း ၊ အားနည်းခြင်း၊ အရသာပျက်ခြင်း၊ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ Zinc supplement သောက်လိုက်လျှင် ရောဂါလက္ခဏာတွေ သက်သာသွားတတ်ပါတယ်။
4. အဆီမှာ ပျော်ဝင်သော ဗိုက်တာမင်များ
သိုင်းရွိုက်ဟိုမုန်း လုပ်ငန်းတွေမှာ ဗိုက်တာမင် A, E, D နှင့် K2 က အတော်လေး အရေးပါပါတယ်။
သိုင်းရွိုက်ဟိုမုန်း တည်ဆောက်ခြင်း နှင့် ဖြန့်ဖြူးခြင်းမှာ ဗိုက်တာမင် A ပါဝင်လုပ်ကိုင်ရပါတယ်။ TSH ပမာဏကိုထိန်းပေးခြင်း နှင့် သိုင်းရွိုက်ဟိုမုန်း T4 ကို T3 ပြောင်းလဲပေးခြင်း မှာလည်း ဗိုက်တာမင် A ပါဝင်ပတ်သတ်ပါတယ်။ သိုင်းရွိုက်ဂရင်းက အိုင်အိုဒင်းစုပ်ယူမှုကို ဗိုက်တာမင် A က ကူညီပေးပါတယ်။ ဝါသော အသီး နှင့် စိမ်းသောအရွက်တွေမှာ ဗိုက်တာမင် A ကြွယ်ဝစွာပါဝင်ပါတယ်။
Hyperthyroid ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ အရိုးပွခြင်းကို ဗိုက်တာမင် D နှင့် K2 က သက်သာပျောက်ကင်းစေပါတယ်။
ဗိုက်တာမင် E မှာ antioxidant အစွမ်းရှိပြီး အော်တိုအင်မြူး သိုင်းရွိုက်ရောဂါတွေအတွက်အကျိုးရှိပါတယ်။
rT3 လို့လူသိများတဲ့ reverse T3 များများမထွက်အောင် သံဓာတ်က တားဆီးပေးပါတယ်။ သံဓာတ်ချို့တဲ့ တဲ့ လူနာတွေမှာ T3, T4 အထွက်နည်းသွားသလို T4 ကနေ T3 လည်း သိပ်မပြောင်းနိုင်တော့ပါ။ဒါကြောင့် သံဓာတ်ချို့တဲ့ တဲ့ လူနာတွေမှာ hypothyroid အဖြစ်များပါတယ်။
6. ဗိုက်တာမင် B-Complex
ဗိုက်တာမင် B6 က သိုင်းရွိုက်ဟိုမုန်း ထုတ်လုပ်ခြင်းကို ကူညီပေးပြီး hypothyroid ရောဂါကို သက်သာစေပါတယ်။ဗိုက်တာမင် B12 နှင့် B2 ချို့တဲ့မှုက သိုင်းရွိုက်ရောဂါတွေ ပိုဖြစ်စေတယ်ဆိုပါတယ်။
7. အမိုင်နိုအက်ဆစ် tyrosine
အမိုင်နိုအက်ဆစ် tyrosine ချို့တဲ့ တဲ့အခါ သိုင်းရွိုက်ဟိုမုန်း သာမက dopamine ပါနည်းသွားတတ်ပါတယ်။ သိပ်ပင်ပန်းတဲ့အခါ အမိုင်နိုအက်ဆစ် tyrosine ချို့တဲ့ တဲ့သူဟာ အာရုံစိုက်လို့မရတော့သလို လှုပ်ရှားမှုနှေးသွားပြီး ခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာရေးကျဆင်းလာတတ်ပါတယ်။ အမိုင်နိုအက်ဆစ် tyrosine ချို့တဲ့ တဲ့အခါ သိုင်းရွိုက်ကျန်းမာရေးပါ ကျဆင်းလာတတ်ပါတယ်။
8. ဗိုက်တာမင် C
ဗိုက်တာမင် C က သိုင်းရွိုက်ဟိုမုန်းများခြင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ဆဲလ်တွေရဲ့ ဒဏ်ရာကို ကုသပေးနိုင်တဲ့ အပြင် adrenal ဂရင်း ကျန်းမာရေးကို ကောင်းစေတယ်။ Adrenal ဂရင်း ကျန်းမာရေးကောင်းလာလျှင် သိုင်းရွိုက်ဂရင်းပါကျန်းမာရေးကောင်းလာပါတယ်။ ဗိုက်တာမင် C ကို ခြောက်လလောက် သောက်ပေးလျှင် T3, T4 နှင့် TSH ပမာဏတွေ တိုးတက်လာတယ်ဆိုတဲ့ သုသေတနတစ်ခုရှိပါတယ်။ ( ref – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24601693 )
Omega3က ဆဲလ်နံရံတွေ ခိုင်မာစေလို့ အော်တိုအင်မြူးကြောင့် သိုင်းရွိုက်ဆဲလ်ပျက်စီးတာကို သက်သာစေတယ်ဆိုပါတယ်။
သိုငျးရှိုကျဂရငျး က သိုငျးရှိုကျဟိုမုနျး ထုတျဖို့ အိုငျအိုဒငျး လိုအပျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ခန်ဓာကိုယျမှာ အိုငျအိုဒငျး ပုံမှနျရှိဖို့ အတျောအရေးကွီးတယျ။ အိုငျအိုဒငျး နညျးတာဖွဈဖွဈ၊ အိုငျအိုဒငျးမြားသှားလြှငျဖွဈဖွဈ သိုငျးရှိုကျလုပျဆောငျခကျြ ခြို့ယှငျးသှားတတျပါတယျ။ အိုငျအိုဒငျး အမွောကျအမွားပါတာက ပငျလယျထှကျ စားစရာတှပေါ။
Selenium က 5-deiodinase အငျဇိုငျးကို ထိနျးခြုပျပွီး သိုကျးရှိုကျဟိုမုနျး T4ကို T3 ပွောငျးပေးတယျ။ သိပျအသုံးမဝငျတဲ့ rT3 ဖွဈတာကို တားနိုငျတယျ။ သိုငျးရှိုကျ anti-bodies တှကေို နညျးသှားစတေယျ။ Selenium ခြို့တဲ့တဲ့အခါ ခုခံစှမျးအား ကဆြငျးသှားပွီး ကငျဆာ နှငျ့ အျောတိုအငျမွူးရောဂါတှေ ဖွဈနိုငျတယျ။ Selenium ကွှယျဝတဲ့ အစားအစာတှစေားပေးခွငျးဖွငျ့ သိုငျးရှိုကျဟိုမုနျးလုပျငနျး ပိုမိုကောငျးလာနိုငျတယျ။ သိုငျးရှိုကျ ရောငျရမျးခွငျး လြော့နညျးသှားနိုငျတယျ။သိုငျးရှိုကျဆဲလျ ပကျြစီးတာကို ပွုပွငျပေးနိုငျတယျ။ Brazil nuts၊ ကွကျဆငျ၊ ဆာဒငျး နှငျ့ ဥအမြိုးမြိုးမှာ selenium တှပေါပါတယျ။ အစားအစာကနေ selenium လုံလောကျအောငျ မရနိုငျဘူးဆိုလြှငျ selenium supplements သောကျဖို့လိုပါလိမျ့မညျ။
ဥအမြိုးမြိုး၊ ကွကျသား၊ ဆျောလမှနျငါး ၊ အမဲသား၊ ဖရုံစေ့ နှငျ့ ဟငျးနုနှယျတှမှော zinc ပါဝငျပါတယျ။ သိုငျးရှိုကျဟိုမုနျး ထုတျလုပျမှုမှာ zinc ပါဝငျပွီး zinc ခြိုတဲ့ တဲ့အခါ hypothyroidism ဝဒေနာ ခံစာရပွီး အရပွေားခွောကျသှခွေ့ငျး၊ ဆံပငျ ကြှတျခွငျး ၊ အားနညျးခွငျး၊ အရသာပကျြခွငျး၊ စိတျဓာတျကခြွငျးတှေ ဖွဈနိုငျပါတယျ။ Zinc supplement သောကျလိုကျလြှငျ ရောဂါလက်ခဏာတှေ သကျသာသှားတတျပါတယျ။
4. အဆီမှာ ပြျောဝငျသော ဗိုကျတာမငျမြား
သိုငျးရှိုကျဟိုမုနျး လုပျငနျးတှမှော ဗိုကျတာမငျ A, E, D နှငျ့ K2 က အတျောလေး အရေးပါပါတယျ။
သိုငျးရှိုကျဟိုမုနျး တညျဆောကျခွငျး နှငျ့ ဖွနျ့ဖွူးခွငျးမှာ ဗိုကျတာမငျ A ပါဝငျလုပျကိုငျရပါတယျ။ TSH ပမာဏကိုထိနျးပေးခွငျး နှငျ့ သိုငျးရှိုကျဟိုမုနျး T4 ကို T3 ပွောငျးလဲပေးခွငျး မှာလညျး ဗိုကျတာမငျ A ပါဝငျပတျသတျပါတယျ။ သိုငျးရှိုကျဂရငျးက အိုငျအိုဒငျးစုပျယူမှုကို ဗိုကျတာမငျ A က ကူညီပေးပါတယျ။ ဝါသော အသီး နှငျ့ စိမျးသောအရှကျတှမှော ဗိုကျတာမငျ A ကွှယျဝစှာပါဝငျပါတယျ။
Hyperthyroid ကွောငျ့ဖွဈတဲ့ အရိုးပှခွငျးကို ဗိုကျတာမငျ D နှငျ့ K2 က သကျသာပြောကျကငျးစပေါတယျ။
ဗိုကျတာမငျ E မှာ antioxidant အစှမျးရှိပွီး အျောတိုအငျမွူး သိုငျးရှိုကျရောဂါတှအေတှကျအကြိုးရှိပါတယျ။
rT3 လို့လူသိမြားတဲ့ reverse T3 မြားမြားမထှကျအောငျ သံဓာတျက တားဆီးပေးပါတယျ။ သံဓာတျခြို့တဲ့ တဲ့ လူနာတှမှော T3, T4 အထှကျနညျးသှားသလို T4 ကနေ T3 လညျး သိပျမပွောငျးနိုငျတော့ပါ။ဒါကွောငျ့ သံဓာတျခြို့တဲ့ တဲ့ လူနာတှမှော hypothyroid အဖွဈမြားပါတယျ။
6. ဗိုကျတာမငျ B-Complex
ဗိုကျတာမငျ B6 က သိုငျးရှိုကျဟိုမုနျး ထုတျလုပျခွငျးကို ကူညီပေးပွီး hypothyroid ရောဂါကို သကျသာစပေါတယျ။ဗိုကျတာမငျ B12 နှငျ့ B2 ခြို့တဲ့မှုက သိုငျးရှိုကျရောဂါတှေ ပိုဖွဈစတေယျဆိုပါတယျ။
7. အမိုငျနိုအကျဆဈ tyrosine
အမိုငျနိုအကျဆဈ tyrosine ခြို့တဲ့ တဲ့အခါ သိုငျးရှိုကျဟိုမုနျး သာမက dopamine ပါနညျးသှားတတျပါတယျ။ သိပျပငျပနျးတဲ့အခါ အမိုငျနိုအကျဆဈ tyrosine ခြို့တဲ့ တဲ့သူဟာ အာရုံစိုကျလို့မရတော့သလို လှုပျရှားမှုနှေးသှားပွီး ခန်ဓာကိုယျကနျြးမာရေးကဆြငျးလာတတျပါတယျ။ အမိုငျနိုအကျဆဈ tyrosine ခြို့တဲ့ တဲ့အခါ သိုငျးရှိုကျကနျြးမာရေးပါ ကဆြငျးလာတတျပါတယျ။
8. ဗိုကျတာမငျ C
ဗိုကျတာမငျ C က သိုငျးရှိုကျဟိုမုနျးမြားခွငျးကွောငျ့ဖွဈတဲ့ ဆဲလျတှရေဲ့ ဒဏျရာကို ကုသပေးနိုငျတဲ့ အပွငျ adrenal ဂရငျး ကနျြးမာရေးကို ကောငျးစတေယျ။ Adrenal ဂရငျး ကနျြးမာရေးကောငျးလာလြှငျ သိုငျးရှိုကျဂရငျးပါကနျြးမာရေးကောငျးလာပါတယျ။ ဗိုကျတာမငျ C ကို ခွောကျလလောကျ သောကျပေးလြှငျ T3, T4 နှငျ့ TSH ပမာဏတှေ တိုးတကျလာတယျဆိုတဲ့ သုသတေနတဈခုရှိပါတယျ။ ( ref – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24601693 )
Omega3က ဆဲလျနံရံတှေ ခိုငျမာစလေို့ အျောတိုအငျမွူးကွောငျ့ သိုငျးရှိုကျဆဲလျပကျြစီးတာကို သကျသာစတေယျဆိုပါတယျ။